OwezokuThuthukiswa koMphakathi unxusa kubhaliswe izinkulisa – Sivubela intuthuko Newspaper
UNKK Nonhlanhl Khoza ofuna zibhaliswe izinkulisa KwaZulu-Natal.
UMNYANGO wezokuTHuthukiswa koMphaakthi KwaZulu-Natal oholwa wuMphathiswa uNkk Nonhlanhla Khoza unxusa abazali ukuqikelela ukubhalisa izingane zabo ezinkulisa ezisemthethweni lapho benesiqiniseko sokuthi izingane zabo ziphephile ukuzishiya khona.
UNkk Khoza ukusho lokhu ekhuza okwenzeke eLittle Flower Creche eThornwood ku-ward 15 ngaphansi kukaMasipala waseThekwini lapho kuphonseke khona ingane yatholakala seyishonile emuva kokubikwa ukuthi ilahlekile kade iye endlini yangasese makhathaleni etholakale ikhalakathele ngaphakathi emgodini.
Emuva kokuzwakala kwalezi zindaba uNkk Khoza ube esethumela ithimba losonhlakalahle ukuhambela le nkulisa kwatholakala ukuthi isebenza ngokungekho emthethweni njengoba kungekho lapho ibhaliswe khona njengesemtethweni. Ube esedlulisa amazwi enduduzo emndenini olahlekelwe yingane yawo. “Lesi yisikhathi esinzima emndnini obusalindele okuhle enganeni yawo ekukhuleni kwayo. Ithimba lethu losonhlalakahle eliqeqeshiwe lizohlanangana nomndeni ukuthola izeluleko zengqondo. Umbiko esiwutholile wukuthi lesi sikhungo sisebenza ngaphandle kwamaphepha kanti nezisebenzi zakhona kazikuqeqeshelwe ukusebenza ngezingane. Ukungabhaliswa kwalesi sikhungo yikhona osekufake umndeni enkingeni yokulahlekelwa yingane yawo,” usho kanje.
UNkk Khoza uthe lesi simo siyadumaza ngoba umnyango wabo unemikhankaso oyiqhubayo yokubhaliswa kwazo zonke izinkulisa eziKwaZulu-Natal ngenhloso yokuphephisa impilo yezingane. “Sixwayisa abantu ukuba mabayeke ukuqhuba izinkulisa zabo ezingabhalisiwe ngoba ozotholakala enza lokho uzobhekana nokushushiswa. Sisezweni elilawulwa wumuthetho ngakho ongahambisani nomthetho wezwe kumele abhekane nokuqondiswa izigwegwe,” kusho yena.
Eqhubeka uNgqongqoshe uKhoza uthe lokhu kuyishwa ukuthi kuzokwenzeka esakhiweni lapho okulindeleke khona ukuthi izingane ziphephe uma zingaphakathi. “Lokhu kuyishwa elikhulu sizomisele ukuthumela abeluleki bezengqondo abazoseka izisebenzi zesikhungo nomndeni ukubhekana nesimo esibehlele. Sithole ukuthi isikhungo sibhalise izingane eziwu-46 iminyaka yazo ephakathi kwemibili nemihlanu. Singeze sazibekezelela izinzo zokuqhuba izinkulisa ezingabhalisiwe emphakathini,” kwengeza uNkk Khoza.